Usoro Ọrụ - ICO Ndepụta n'ịntanetị
★ Nkwalite ★
Ndepụta mgbanwe kacha elu
Ọrụ ICO Marketing
Ọrụ Ndepụta mgbanwe Crypto
Nyocha nkwekọrịta Smart
ICO dabere na Ethereum
Binance Smart Chain dabere ICO
Mara Onye Ahịa Gị (KYC)
Ojiji nke ICOListingOnline.com n’okpuru usoro na ọnọdụ ndị a. Site na ịlele ma ọ bụ iji ọrụ nke ICOListingOnline.com, ị kwenyere na iwu ndị a ga-eke gị.
1.0 Ojiji A Na-anabata
1.1 agree kwenyere na ị gaghị emebi iwu ọ bụla, nkwekọrịta, ihe ọgụgụ isi, ma ọ bụ ikike ndị ọzọ nke atọ ma ọ bụ mee ihe ike, na ị bụ naanị maka omume gị mgbe ị na-eji saịtị anyị. N'etinyeghi oke ihe niile edepụtara, ị kwenyere na ị gaghị:
Jiri saịtị anyị n’ụzọ nwere ike igbochi, ịkpaghasị, ma ọ bụ gbochie ndị ọrụ ndị ọzọ iji saịtị anyị, ma ọ bụ nke nwere ike imebi, mebie, bufee, ma ọ bụ mebie ọrụ saịtị anyị n’ụzọ ọ bụla;
Jiri saịtị anyị iji kwụọ ụgwọ, kwado, ma ọ bụ tinye aka na ntinye ego ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ megidere iwu;
Jiri robot, ududo, crawler, scraper, ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ akpaghị aka ma ọ bụ ihu igwe nke anyị na-enyeghị iji nweta saịtị anyị ma ọ bụ wepụ data;
Gbalịa igbochi usoro nzacha ọdịnaya ọ bụla anyị ji arụ ọrụ, ma ọ bụ nwaa ịnweta ọrụ ọ bụla ma ọ bụ mpaghara nke saịtị anyị na-enweghị ikike ịnweta;
Zụlite ngwa ọ bụla nke atọ nke na-emekọrịta na saịtị anyị na-enweghị nkwenye ederede ederede;
Nye ozi ụgha, na-ezighi ezi, ma ọ bụ nke nduhie;
Gbaa ma ọ bụ mee ka ndị ọzọ soro na-arụ ọrụ ọ bụla amachibidoro n'okpuru ngalaba a
Jiri saịtị ahụ n'ụzọ ọ bụla nke na-emebi iwu ọ bụla metụtara obodo, mba, gọọmentị ma ọ bụ iwu mba ụwa ma ọ bụ ụkpụrụ;
Detuo, jiri, gosipụta ma ọ bụ kesaa ozi ọ bụla enwetara site na saịtị, ma ọ bụ site na ndị ọzọ ma ọ bụ site na ndị ọzọ, na-enweghị nkwenye anyị;
Jiri, gosipụta ma ọ bụ kesaa data ọ bụla enwetara na imebi iwu ndị a;
Mebie ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, gụnyere ikike nwebisiinka, nchọpụta ikike, ụghalaahịa, ihe nzuzo azụmahịa, ma ọ bụ ikike ndị ọzọ;
Mebie ikike ọgụgụ isi anyị ma ọ bụ ikike ndị ọzọ, gụnyere, na-enweghị mmachi, (i) Iyingomi ma ọ bụ ikesa ihe anyị ma ọ bụ (ii) Iyingomi ma ọ bụ ikesa teknụzụ anyị, belụsọ ma ewepụtara ya n'okpuru ikikere isi mmalite; (iii) n'iji okwu a bu “ICOListingOnline.com” ma obu logos anyi n’aha ahia obula, email ma obu URL n’enweghi nkwenye anyi;
Gosiputa ma obu kwuo na inonye nkwado ma obu nkwado nke ICOListingOnline.com n’enweghi nkwenye anyi kwuru;
Mgbazinye, mgbazinye ego, mgbazinye ego, ahia, ree / resịrị nnweta saịtị ma ọ bụ data metụtara;
Mee iwu n'uzo na ezighi ezi ma ọ bụ n'etinyeghị aka n'ihe gbasara Ọrụ anyị, gụnyere ịkwụghị ọtọ, mkparị ma ọ bụ ịkpa oke;
Ziga ezighi ezi, okwu rụrụ arụ, na-awụ akpata oyi n'ahụ, ịkpọasị, iyi egwu ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighi ezi ma ọ bụ iwe mkpesa ma ọ bụ esemokwu onwe onye;
Na-akpasu gị iwe, na-emegbu ma ọ bụ na-emejọ onye ọzọ;
Zipu ma ọ bụ ziga mgbasa ozi ọ bụla a na-akwadoghị ma ọ bụ na-akwadoghị, “ozi junk,” “spam,” “akwụkwọ ozi olu,” “atụmatụ pyramid,” ma ọ bụ ụdị arịrịọ ọ bụla nke anyị na-enwetaghị ikike;
Gosiputa ozi nke ị nweghi nkwenye igosipụta (dịka ozi nzuzo nke ndị ọzọ;
Ziga ihe ọ bụla nwere nje virus, ikpuru, ma ọ bụ koodu ọ bụla ọzọ na-emerụ ahụ;
Zụlite, kwado ma ọ bụ jiri ngwanrọ, ngwaọrụ, edemede, robots, ma ọ bụ ụzọ ọ bụla ma ọ bụ usoro (gụnyere crawlers, plugins nchọgharị na mgbakwunye, ma ọ bụ teknụzụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ aka ọ bụla) iji kpochapụ saịtị ma ọ bụ na-edegharị data sitere na saịtị;
Na-agabiga ma ọ bụ na-agabiga njikwa ohere ọ bụla ma ọ bụ oke ojiji saịtị;
Injinia na-agagharị, gbasasịa, kwasasịa, kwupụta ma ọ bụ nwaa anwa anwa nweta koodu ntinye maka saịtị ma ọ bụ teknụzụ ọ bụla metụtara ya nke na-emegheghị;
Nyochaa nnweta saịtị, arụmọrụ ma ọ bụ arụmọrụ maka ebumnuche asọmpi ọ bụla;
Tinye aka na "ịhazi," "na-atụgharị uche," ma ọ bụ na-emezigharị ọdịdị ma ọ bụ ọrụ nke Saịtị;
Banye na Saịtị ma e wezụga site na ihu nke enyere nke anyị gosipụtara, dị ka ngwa mkpanaka (ma ọ bụrụ na ọ bụla) na ICOListingOnline.com;
Akpagbu ihe nchebe ọ bụla nke saịtị ahụ; na / ma ọ bụ
Na-egbochi ọrụ nke, ma ọ bụ tinye ibu na-enweghị ezi uche na saịtị (dịka, spam, ịgọnahụ mwakpo ọrụ, nje).
2.1 I kwenyere ma kweta na ọdịnaya nke ICOListingOnline.com bụ ozi na ị na-eji saịtị ahụ na ihe ọghọm gị.
2.2 You kwenyere ma kwenye na ị gụọla, ghọta, ma kee ya na Disclaimer na akwụkwọ ikike niile edepụtara na saịtị a.
2.3 You kwenyere ihe egwu ndị a metụtara ego mebere nke ICOListingOnline.com anaghị arụ ọrụ:
Virtual ego abụghị iwu dị nro, gọọmentị anaghị akwado ya, yana akaụntụ na nnabata uru adabaghị na Federal Deposit Insurance Corporation ma ọ bụ Nchedo Investor Protection Corporation ma ọ bụ nchekwa yiri ya na ikike ndị na-abụghị US maka akaụntụ.
Mmebi iwu na usoro iwu ma ọ bụ omume na steeti, gọọmentị etiti, ma ọ bụ mba ụwa nwere ike imetụta ojiji, ịnyefe, mgbanwe, na uru nke ego ego mebere n'ụzọ dị njọ.
Azụmahịa na ego mebere nwere ike ịbụ nke a na-agaghị agbanwe agbanwe, yana, yabụ, ọghọm n'ihi aghụghọ ma ọ bụ azụmaahịa ọghọm enweghị ike iweghachite.
A ga-ewere ụfọdụ azụmahịa azụmaahịa mebere mgbe emere ya na ndekọ aha ọha, nke bụchaghị ụbọchị ma ọ bụ oge onye ahịa ahụ malitere azụmaahịa ahụ.
Enwere ike inweta ego nke ego kwalite site na ịga n'ihu njikere nke ndị sonyere n'ahịa iji gbanwere ego ego maka ego ego, nke nwere ike ibute ikike nke na-adịgide adịgide na ngụkọta nke uru nke otu ụdị ego kwụrụ ụgwọ ga-efu ahịa maka ego ahụ mebere.
Enweghi mmesi obi ike na onye na-anabata ego ego dị ka ịkwụ ụgwọ taa ga-anọgide na-eme ya n'ọdịnihu.
Vogha na enweghị ike ịkọ ọnụahịa nke ego ego mebere na ego fiat nwere ike ibute nnukwu mfu.
Ọdịdị nke ego ego pụtara na nsogbu ọ bụla na teknụzụ nke ICOListingOnline.com nwetara nwere ike igbochi ịnweta ma ọ bụ ojiji nke ego nke onye ahịa.
Akaụntụ ọ bụla ma ọ bụ akaụntụ ntụkwasị obi nke ICOListingOnline.com chebere maka abamuru nke ndị ahịa ya nwere ike ọ gaghị ezu iji kpuchie ọghọm niile ndị ahịa kpatara.
Onye ọrụ ahụ kwenyere na ihe egwu ndị a dị egwu maka ojiji ọ bụla nke Ọrụ ICOListingOnline.com ma kwenye n'ụzọ doro anya ka ị ghara ijide ICOListingOnline.com ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ihe egwu ndị a emee:
2.3.1 Ihe ọghọm nke usoro iwu na otu ma ọ bụ karịa usoro iwu:
Enwere ike imetụta ICOListingOnline.com site na otu usoro iwu ma ọ bụ karịa usoro iwu, nke nwere ike igbochi ma ọ bụ belata ikike nke ICOListingOnline.com iji gaa n'ihu ịzụlite ICOListingOnline.com, ma ọ bụ nke nwere ike igbochi ma ọ bụ belata ikike Onye ọrụ iji ICOListingOnline .Ch.
2.3.2 Ihe ize ndụ nke mgbanwe, UNOFFICIAL ICOListingOnline.com NETWORKS:
O kwere omume na enwere ike hiwe netwọkụ ndị ọzọ dabere na ICOListingOnline.com, nke na-eji otu koodu onodu emeghe na usoro mmeghe nke na-akpata Ọrụ ICOListingOnline.com.
2,3.3 KWES THATR THAT NA ICLỌ Ọrụ ICOListingOnline.com, D DE KA A BVRV, Agaghị ezute atụmanya nke onye ọrụ:
Onye ọrụ ahụ na-achọpụta na ọrụ ICOListingOnline.com na-etolite ma nwee ike nwee mgbanwe mgbanwe dị ukwuu tupu ịhapụ ya. Onye ọrụ ahụ kwenyere na atụmanya ọ bụla gbasara ụdị na arụmọrụ nke ọrụ ICOListingOnline.com nke Onye Ọrụ nwere ike ghara iru na ntọhapụ nke ọrụ ICOListingOnline.com, maka ọtụtụ ebumnuche ọ bụla gụnyere mgbanwe na atụmatụ na mmejuputa atụmatụ na mmezu. nke mmejuputa oru ndi ICOListingOnline.com.
3.0 Ihe ngosi eletrọniki
3.1 Nkwenye na nnyefe eletrọniki. You kwenyere ma kwenye ịnata nkwukọrịta elektrọnik niile, nkwekọrịta, akwụkwọ, akwụkwọ nnata, ọkwa, na ngosipụta (mkpokọta, "Nkwukọrịta") nke ICOListingOnline.com na-enye na njikọ nke saịtị gị. Agree kwenyere na ICOListingOnline.com nwere ike ịnye gị Nkwukọrịta ndị a site na izipu ha na ICOListingOnline.com, site na zitere gị ha na adreesị ozi-e ị nyere, yana / ma ọ bụ site na iziga SMS ma ọ bụ ozi ederede na nọmba ekwentị mkpanaaka ị nyere. . Gị ozi nkịtị ozi, data na ndị ọzọ na udu na ụgwọ nwere ike emetụta ọ bụla mobile Communications. Kwesịrị ịdebe akwụkwọ nke Nkwukọrịta elektrọnik site na ibipụta otu akwụkwọ ma ọ bụ chekwaa otu kọmputa. I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị ka anyị rịọ akwụkwọ eletrik ọzọ nke Nkwukọrịta ma ọ bụ, maka ego, mbipụta akwụkwọ nke Nkwukọrịta (dị ka akọwara n'okpuru).
3.2 Ihe ngwaike na ngwanrọ. Iji nweta ma jigide Nkwukọrịta elektrọnik, ị ga-achọ kọmputa nwere njikọ intaneti nke nwere ihe nchọgharị weebụ dị ugbu a na kuki enyere na 128-bit encryption. Ikwesiri inwe adreesị ozi-e ziri ezi na faịlụ na ICOListingOnline.com ma nwee ohere nchekwa zuru oke iji chekwaa Nkwukọrịta gara aga ma ọ bụ ngwa nbipute arụnyere iji bipụta ha.
3.3 Arịrịọ Akwụkwọ Nchịkọta. Ọ bụrụ na, mgbe ị kwenyechara ịnata Nkwukọrịta site na kọmputa, ị ga-achọ akwụkwọ akwụkwọ nkwukọrịta nke anyị zitere gị na mbụ, ị nwere ike ịrịọ otu n'ime ụbọchị 30 ka ụbọchị ahụ anyị nyere gị Nkwukọrịta site na ịkpọtụrụ anyị na ederede. Ka anyị wee zitere gị akwụkwọ akwụkwọ, ị ga-enwerịrị adres ebe dị ugbu a na faịlụ na ICOListingOnline.com. Biko mara na ICOListingOnline.com na-arụ ọrụ naanị n'ịntanetị ma ọ na-abụ nnukwu ibu anyị iwepụta akwụkwọ nke Nkwukọrịta akwụkwọ. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ nke akwụkwọ, ị ghọtara ma kwenye na ICOListingOnline.com nwere ike ịgba gị ụgwọ ego nhazi kwesịrị ekwesị maka ibe ọ bụla nke Nkwukọrịta achọrọ.
3.4 Na-emelite ozi kọntaktị. Ọ bụ ọrụ gị idowe adreesị ozi-e gị na/ma ọ bụ akara ekwentị mkpanaaka na faịlụ na ICOListingOnline.com ruo ugbu a ka ICOListingOnline.com nwee ike iso gị kparịta ụka na eletrọnịkị. Ị ghọtara wee kweta na ọ bụrụ na ICOListingOnline.com ezitere gị nzikọrịta ozi eletrọnịkị mana ị naghị enweta ya n'ihi na adreesị ozi-e gị ma ọ bụ akara ekwentị mkpanaaka na faịlụ ezighi ezi, emechiela, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ gị gbochiri, ma ọ bụ na ị nweghị ike. Nata nzikọrịta ozi eletrọnịkị, ICOListingOnline.com ga-ewere na ọ nyere gị nzikọrịta ozi. Biko mara na ọ bụrụ na ị na-eji nzacha spam na-egbochi ma ọ bụ na-emegharị ozi-e sitere na ndị na-ezigara ndị na-edeghị aha n'akwụkwọ adreesị ozi-e gị, ị ga-etinyerịrị ICOListingOnline.com n'akwụkwọ adreesị ozi-e gị ka ị wee nwee ike ịnata nzikọrịta ozi anyị na-ezigara ya. ị.
4.0 Ọdịnaya nke Atọ
4.1 N'iji saịtị anyị, ị ga-elele ọdịnaya nke ndị ọzọ nyere, gụnyere isiokwu, nyocha, nkọwa, nghọta, nyocha, na njikọ na ibe weebụ nke ndị ọzọ, gụnyere mana ọnweghị oke na blọọgụ, ọgbakọ, obodo, na netwọkụ mmekọrịta. Anyị anaghị achịkwa ma ọ bụ kwado ọdịnaya nke Onye ọ bụla ma anyị anaghị arụ ọrụ maka ya, gụnyere enweghị mmachi ihe nwere ike iduhie, ezughi oke, ezighi ezi, ezighi ezi, adịghị mma, ma ọ bụ ihe na-adịghị mma. Anyị anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nwee ụgwọ maka ọnwụ ma ọ bụ mmebi ọ bụla etinyere n'ihi ọdịnaya nke ndị ọzọ na ICOListingOnline.com, ị ghọtara na nlele gị na ojiji nke ọdịnaya ndị ọzọ, yana mmekọrịta gị na ndị ọzọ. jikọtara na saịtị anyị, dị na nsogbu gị.
5.0 AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ NTRAKA
EBUGH AS D AS KA O DPR KA O doro anya na e dere na nke anyi dere, ANYED NA-AD S ỌR S ANY ON NA “D IS KA Ọ B” ”NA“ D AV KA A PAR ””. ANY WE KWES DISR DIS KWES DISR, KWES ,R,, NA WA KWES ,R,, Ikike niile nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ nkwupụta ma ọ bụ na-arụ ọrụ, gụnyere, na-enweghị njedebe, ikikere nke ọrụ ahịa, ọnọdụ maka nzube dị mkpa, isi okwu na nke na-enweghị isi. Ọdịnaya, na ihe ndị dị n'ime ya.
Ị na-ekweta na ozi ị na-echekwa ma ọ bụ bufee SITE ọrụ anyị nwere ike ịghọ IRRETRIEVABLY furu efu ma ọ emerụ ma ọ bụ Nwa oge dịghịzi adị ruru ka a dịgasị iche iche nke akpata, gụnyere Software ọdịda, Protocol AGBANWE BY ọzọ na enye, Ịntanetị outages, ike ka ike ihe ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ gụnyere THIRD- Mgbakọ ndị DDOS Mwakpo, Ahazi ma ọ bụ enweghị nchekwa, ma ọ bụ ndị ọzọ na-akpata ma ọ bụ n'ime ma ọ bụ n'èzí. ARE KWES SOLR SOL KWES FORR FOR FORBỌCH AND NA MALỌ MALỌ OPLỌ NKWUKWU Ọ B YOU Ọ B INRM NA YOU NA-echekwa ma ọ bụ na-agafe na ọrụ anyị.
OGWU ANYANWU 6.0
KWES THERX KWESXR BY KWES BYR BY KWES BYR BY KWES BYR BY KWES ,R, KWES ,R,, N'ỌD EVGH EV Ihe omume ICOListingOnline.com ma ọ bụ ndị na-enye ya, ndị mmekọ, ma ọ bụ ndị na-akwanyere ya ùgwù, ndị nduzi, ndị ọrụ, ndị na-achọ ọrụ, ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na-anọchite anya, , MA Ọ B CON ỌB DRSE ỌHSER WHAT NA-EME NA-EBE Ọ B B MA NA-AD TOGHIM IMB TOR TO TOBERSRERS ND,, NWA NA AH,, MA Ọ B EM ỌB EMROT ỌROT, MA Ọ B FOR Ọ B FOR ỌB DR FOR FORB LR OF OFLỌ BLỌ USLỌ ,LỌ ITLỌ, LB OFR OF INBỌR L, MA Ọ B L OSB OFR OF BLỌ Azụmaahịa na-esite n'iji ma ọ bụ enweghị ike iji ọrụ ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị echekwa, ọ bụrụgodị na a na-adụ ICOListingOnline.com ohere maka ụdị nsogbu ndị a. N'NOB EVGHENT ENTBENTR WILL ICB WILLR WILL OLBOLROL ICOListingOnline.com NA-EGO ma ọ bụ na-ebili site na ọrụ gị karịa NET ego a na-akwụ na ICOListingOnline.com maka iji ọrụ pụrụ iche na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ USD $ 10.00 Enweghị ụgwọ maka ahịa ndị ọrụ.
Agree kwenyere ịgbachitere, kwụghachi, ma jide ICOListingOnline.com na-enweghị mmerụ ahụ (na onye ọ bụla n'ime ndị isi anyị, ndị isi, ndị otu, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị insurers, ndị ọka iwu, ọrụ, na ndị mmekọ) site na nkwupụta ọ bụla, ọchịchọ, ihe, mmebi, mmebi , ụgwọ, ma ọ bụ mmefu, gụnyere na enweghị mmachi ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, na-esite ma ọ bụ metụtara (a) ojiji ị, ma ọ bụ omume metụtara ojiji nke saịtị anyị; (b) nzaghachi ọ bụla ị nyere; (ch) mmebi iwu na usoro ndi a; ma ọ bụ (d) mmebi iwu ọ bụla nke onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ. Ọ bụrụ na enyere gị ịkwụ ụgwọ anyị, anyị ga-enwe ikike, naanị otu anyị nwere ike, ịchịkwa ihe ọ bụla ma ọ bụ ịga n'ihu (na-akwụ ụgwọ) ma chọpụta ma anyị chọrọ idozi ya.
8.0 contkwụsị Ọrụ
Anyị nwere ike, naanị otu uche anyị na enweghị akwụ ụgwọ maka gị, na ma ọ bụ na-enweghị ọkwa na n'oge ọ bụla, gbanwee ma ọ bụ kwụsị, nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide, akụkụ ọ bụla nke saịtị ma ọ bụ ọrụ anyị.
Anyị ga-enweta ikike niile, gụnyere ikike ikike ọgụgụ isi niile, na nzaghachi ọ bụla, aro, echiche, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ gbasara ICOListingOnline.com nke ị nyere. Nzaghachi ọ bụla ị nyefere abụghị nke nzuzo ma bụrụ naanị ihe nke ICOListingOnline.com. Anyị ga-enweta ikike iji ọrụ na mgbasa ozi nke ụdị nzaghachi maka ebumnuche ọ bụla, azụmaahịa ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-enweghị nkwenye ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ gị. Ive napụrụ ikike ọ bụla ịnwere ịnwe na nzaghachi (gụnyere ikike nwebisinka ọ bụla ma ọ bụ ikike omume). Ezitela anyị nzaghachi ma ọ bụrụ na ị tụrụ anya na a ga-akwụ gị ụgwọ ma ọ bụ chọọ ịga n'ihu ịnwe ma ọ bụ kwuo ikike na echiche ọ bụla ị zitere anyị Anyị jidere ikike igosipụta njirimara gị na ndị ọzọ ọ bụla na-azọrọ na ọdịnaya ọ bụla ị zitere bụ imebi ikike ikike ọgụgụ isi ha, ma ọ bụ ikike ha nwere nzuzo. Anyị nwere ikike iwepu post ọ bụla ị mere na webụsaịtị anyị ma ọ bụrụ na, n'uche anyị, post gị anaghị agbaso ụkpụrụ ọdịnaya akọwapụtara na ngalaba a.
10.0 Nwebisiinka na ikike ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ
Ọ gwụla ma anyị gosipụtara, ikike nwebisiinka niile na ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ na ọdịnaya niile na ihe ndị ọzọ dị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ nye njikọ na ọrụ anyị, gụnyere, na-enweghị njedebe, akara ICOListingOnline.com na atụmatụ niile, ederede, eserese, eserese , ozi, data, ngwanrọ, sọftụwia, faịlị ụda, faịlị ndị ọzọ, yana nhọpụta na nhazi ya (n’otu, “ICOListingOnline.com Materials”) bụ akụ ndị nwe ụlọ nke ICOListingOnline.com ma ọ bụ ndị nyere anyị ikikere ma ọ bụ ndị na - ebubata anyị ma ndị na - ebubata anyị ma iwu niile nke iwu nwebisiinka na-echebe na iwu ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ. Anyị na-enye gị ikikere pere mpe, nke enweghị ikike na nke enweghị ikike iji nweta ma jiri ihe ICOListingOnline.com maka iji onwe gị ma ọ bụ azụmaahịa gị. Udi ikike a di n’okpuru usoro ndi a ma ghara ikwe ka (a) resa nke ihe ndi ICOListingOnline.com; (b) nkesa, mmehe oha, ma obu ngosi oha nke ihe ndi ICOListingOnline.com; (c) igbanwe ma obu uzo ozo eji ihe ndi ICOListingOnline.com, ma obu uzo obula; ma obu (d) iji ihe ndi ICOListingOnline.com mee ihe karia maka ebumnuche ha.
"ICOListingOnline.com," akara ICOListingOnline.com, yana aha ma ọ bụ aha ọrụ ọ bụla nke ICOListingOnline.com, akara ngosi, ma ọ bụ slogans nke nwere ike ịpụta na saịtị anyị bụ ụghalaahịa nke ICOListingOnline.com ma ghara ị beomi ya, i imomi ya, ma ọ bụ jiri ya, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, na-enweghị ikike ederede ederede tupu anyị. Nweghị ike iji ụghalaahịa ọ bụla, ngwaahịa, ma ọ bụ aha ọrụ nke ICOListingOnline.com na-enweghị ikike edere ede ede na mbụ, gụnyere na enweghị mmachi ọ bụla metatags ma ọ bụ "ederede zoro ezo" ndị ọzọ na-eji akara ụghalaahịa ọ bụla, ngwaahịa, ma ọ bụ aha ọrụ nke ICOListingOnline.com. Na mgbakwunye, ọdịdị na mmetụta nke saịtị anyị, gụnyere isi peeji niile, eserese ọdịnala, akara ngosi bọtịnụ, na edemede, bụ akara ọrụ, ụghalaahịa, na / ma ọ bụ uwe ahia nke ICOListingOnline.com na enwere ike ghara i coomi ya, iitatedomi ya, ma ọ bụ eji, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, na-enweghị ikike ederede ederede tupu anyị. Ụghalaahịa ndị ọzọ niile, ụghalaahia edenyere, aha ngwaahịa, na aha ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara aha ndị a kpọtụrụ aha na saịtị anyị bụ nke ndị nwe ha. Ntughari maka ngwaahịa, ọrụ, usoro ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, site na aha, ụghalaahịa, onye nrụpụta, onye na-eweta ngwaahịa, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ apụtaghị ma ọ bụ gosipụta nkwado, nkwado, ma ọ bụ nkwanye site n'aka anyị.
Iwu Nzuzo 12.0
Biko gaa na Iwu Nzuzo anyị maka ozi gbasara otu anyị si anakọta, jiri, ma kesaa ozi gị.
13. Enweghị Ọrụ Nyochaa
Agree kwenyere na anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ọdịnaya nke ndị ọzọ na-enye. Anyị enweghị ọrụ iji nyochaa ọdịnaya nke ị nwere ike ịnye ma ọ bụ biputere, mana anyị nwere ikike ịjụ ibipụ ma ọ bụ dezie ọdịnaya etinyere. Anyị nwere ikike iwepu ọdịnaya ọ bụla maka ihe ọ bụla n'oge ọ bụla.
14.0 Iwu dabara
Understand ghọtara ma kwenye ido onwe gị n'okpuru ikike nke aka nke ụlọ ikpe nke obodo, steeti, mpaghara, ma ọ bụ ókèala nke ICOListingOnline.com kpebisiri ike idozi okwu iwu ọ bụla sitere na usoro na ọnọdụ ndị a ma ọ bụ metụtara metụtara ojiji nke ICOListingOnline.com . Y’oburu na ulo ikpe nke nwere ikike kwuputara na ndokwa obula nke nkwekorita a abaghi ​​uru, ya bu na a gha ewepu nkwekorita a n’usoro na onodu ya na okwu ndi ozo g’abia na idi ire n’iru.
15.1 Nkwekọrịta dum; Iwu nke Mkpa. Usoro na ọnọdụ a nwere nkwekọrịta niile, ma dozie nghọta na mbụ niile, n'etiti ndị ọzọ gbasara iji ICOListingOnline.com. Usoro ndị a anaghị agbanwe usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta kọmputa ma ọ bụ ederede ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịnwe na ICOListingOnline.com. Ọ bụrụ na esemokwu dị n'etiti usoro na ọnọdụ ndị a yana nkwekọrịta ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịnwe na ICOListingOnline.com, usoro nke nkwekọrịta ọzọ ahụ ga-achịkwa naanị ma ọ bụrụ na akọwapụtara usoro na ọnọdụ ndị a ma kwupụta na nkwekọrịta ndị ọzọ gafere.
15.2 Ndezigharị. ICOListingOnline.com nwere ikike imelite usoro ya na ojiji ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọ bụla karịa itinye usoro na ọnọdụ dị ugbu a na saịtị ahụ. Mostdị usoro na ọnọdụ kachasị dị ugbu a ka a ga-ahụ mgbe niile na ICOListingOnline.com. A na-agba ndị ọrụ ume ịlele usoro na ọnọdụ oge ọ bụla ha jiri saịtị ahụ.
15.3 Kagbuo. Ọdịda anyị na-eme ma ọ bụ na-egbu oge na-egosipụta ikike ọ bụla n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a agaghị arụ ọrụ dị ka ịhapụ ya ma ọ bụ dị ka njedebe na ịme otu ma ọ bụ ikike yiri ya n'ọdịnihu.
15.4 Ndagharị. Ọ bụrụ na achọtara nke ọ bụla n'ime usoro na ọnọdụ a ka ọ bụrụ nke enweghị isi ma ọ bụ na-enweghị isi site na ụlọ ikpe nke ikike ikike, nkwado ma ọ bụ ịmanye nke nke ọ bụla n'ime usoro na ọnọdụ ndị a ga-adịgide n'ike na mmetụta, yana ndokwa nke achọtara ịbụ akụkụ na-abaghị uru ma ọ bụ ndị a na-enweghị ike itinye n'ọrụ ga-anọgide na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke nke iwu nyere.
Ọrụ 15.5. Gaghị ekenye ma ọ bụ nyefee ikike gị ọ bụla ma ọ bụ ọrụ gị n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a na-enweghị nkwenye ederede edepụtara site na ICOListingOnline.com, gụnyere site na ịrụ ọrụ nke iwu ma ọ bụ na njikọ metụtara mgbanwe ọ bụla nke njikwa. ICOListingOnline.com nwere ike ekenye ma ọ bụ nyefee ikike ọ bụla ma ọ bụ ikike ya niile n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ ya, na-enwetaghị nkwenye gị ma ọ bụ nnabata gị.
Isi nke 15.6. Isiokwu nke ngalaba ga-adị mma naanị, ọ gaghị ejedebe ma ọ bụ were kọwaa ụdị ngalaba ahụ.
15.7 Surlanahụ. Ndaba nke usoro na ọnọdụ a ga-alanarị nkwụsị ma ọ bụ njedebe nke usoro na ọnọdụ ndị a dị ka achọrọ iji nye ha ike na mmetụta ha zuru oke.
15.8 Ike Majeure. Anyị agaghị aza ajụjụ maka igbu oge, ọdịda na arụmọrụ ma ọ bụ nkwụsị nke ọrụ nke na-akpata ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi site na ihe ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ karịrị njikwa anyị nwere ezi uche, gụnyere ma ọnweghị oke, oge ọ bụla ma ọ bụ ọdịda ọ bụla n'ihi ọrụ ọ bụla nke Chineke, omume obodo ma ọ bụ ndị isi agha, omume nke ndị na-eyi ọha egwu, ọgba aghara obodo, agha, iku ma ọ bụ esemokwu ọrụ ndị ọzọ, ọkụ, nkwụsị na nkwukọrịta ma ọ bụ ọrụ orntanetị ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ ntanetị, ọdịda nke akụrụngwa na / ma ọ bụ ngwanrọ, ọdachi ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịrị nke anyị njikwa ezi uche ma ghara imetụta ndaba na ịmanye iwu nke usoro ọ bụla fọdụrụnụ.
16.0 nke kwesiri
16.1 Ikike ruru. Maka mmadụ tozuru oke imeghe akaụntụ ICOListingOnline.com ma jiri ọrụ ahụ, ị ​​ga-adị opekata mpe afọ 18, ma ọ bụ afọ nke imirikiti na steeti obibi gị.
17.0 Nnyocha nke Onwe
17.1 Und Na-eme Nduzi nke Onwe Gị. Ezubere iji ọdịnaya ICOListingOnline.com mee ihe ma gha iji ya maka naanị ebumnuche ọmụma. Na-anọchite anya na ị na-eme nyocha na nyocha nke aka gị tupu ị tinye ego ọ bụla dabere n'ọnọdụ nke gị. Kwesịrị ịnara ndụmọdụ ndụmọdụ onwe onye n'aka onye ọkachamara n'ihe metụtara, ma ọ bụ nyocha na nyocha nke onwe gị, ozi ọ bụla ịchọrọ na ICOListingOnline.com ma chọọ ịdabere na ya, ma ọ bụ maka ebumnuche itinye ego ma ọ bụ na-abụghị nke ọzọ.
18.0 Enweghị Taxtụ ma ọ bụ Ndụmọdụ Iwu
18.1 ICOListingOnline.com Anaghị Enye Ndụmọdụ Taxtụ ma ọ bụ Ndụmọdụ Iwu. ICOListingOnline.com anaghị enye ọrụ ma ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ. Anyị abụghị ndị na-edekọ ego ma ọ bụ ndị ọka iwu. Enweghị ọdịnaya dị na saịtị ahụ mejupụtara - ma ọ bụ kwesịrị ịghọta dị ka iwu - ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ ụtụ isi. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị chọọ ndụmọdụ onwe gị site na isoro ọkachamara nwere ikikere.
19.0 Enweghị Ndụmọdụ Ndụmọdụ Onwe
19.1 ICOListingOnline.com anaghị enye ndụmọdụ ndụmọdụ ego ma ọ bụ ọrụ brokering. ICOListingOnline.com abughi onye ntinye ego ma obu onye na etinye ego. Enweghị ọdịnaya dị na saịtị ahụ bụ - ma ọ bụ kwesịrị ịghọta dị ka ihe mejupụtara - nkwanye ịbanye na azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ itinye ego, ma ọ bụ nkwenye, nkwanye ma ọ bụ ọkwa nke ọrụ ọ bụla ma ọ bụ itinye ego. Anyị anaghị enye ndụmọdụ ma ọ bụ echiche nke ahaziri ka ọrụ ma ọ bụ itinye ego maka ego ya dabara na mkpa otu onye.
18.1 ICOListingOnline.com Anaghị Enye Ndụmọdụ Taxtụ ma ọ bụ Ndụmọdụ Iwu. ICOListingOnline.com anaghị enye ọrụ ma ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ. Anyị abụghị ndị na-edekọ ego na ndị ọka iwu. Enweghị ọdịnaya dị na saịtị ahụ mejupụtara - ma ọ bụ kwesịrị ịghọta dị ka iwu - ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ ụtụ isi. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị chọọ ndụmọdụ onwe gị site na isoro ọkachamara nwere ikikere.
Bitcoin maka ndị mbido
Bitcoin Halving - Olee otú Halving Cycle si arụ ọrụ na gịnị kpatara o ji dị mkpa?
Otu esi anabata Bitcoin na Ụlọ Ahịa m? Ntuziaka maka ịkwụ ụgwọ na BTC
Kedu ihe bụ na Kedu ka Bitcoin Mining si arụ ọrụ. Ihe niile gbasara ka m Bitcoins?
Bitcoin ọ bụ iwu kwadoro? Mmelite 2021 n'okwu a
Kedu ihe bụ Bitcoin? Akụkọ ihe mere eme, njirimara, uru na ọghọm
ATMs Bitcoin: Ntuziaka mmalite maka ATM Bitcoin
Ọnye na-bụ Satoshi Nakamoto? Onye okike nke Bitcoin
Gịnị bụ ebumnuche nke Bitcoin: Nkọwa ma ọ bụ Dollarization?
Nzukọ Bitcoin: Ntuziaka onye mbido na ebe ị ga-atụle BTC
A nabatara Bitcoin Ebe a: Kedu ka azụmahịa nwere ike isi malite na Bitcoin?
Kedu ihe ị ga-eji Bitcoin zụta?
Kedu ka esi ere Bitcoin?
Otu esi azụta Bitcoin: Omume kacha mma, ebe ịzụrụ, ndụmọdụ
Bitcoin Wallet: Ihe niile I Kwesịrị Ịma
Kedu ihe bụ blockchain Bitcoin? Ntuziaka maka teknụzụ dị n'azụ BTC
Kedu ihe bụ Bitcoin na kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Cryptocurrencies: Gịnị bụ ha na kedu ka Digital Money si arụ ọrụ?
Kedu ihe akaebe nke Stake (PoS)
Debanye aha n'akwụkwọ akụkọ anyị
Agbagharala akụkọ kachasị ọhụrụ!
Nnukwu! Lelee igbe mbata gị iji kwado ndenye aha gị.
E-mail nkwado izugbe:
ICO Ndepụta Email:
Nkwado nkata Telegram:
Maka Ihe niile
Ndepụta ICO N'ịntanetị bụ ọkwa ICO nọọrọ onwe ya na ikpo okwu ndepụta yana obodo ngọngọ na ndị ọrụ na-abawanye kwa ụbọchị.
Enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na nkata ndụ ma ọ bụ telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ depụta ICO gị ma ọ bụ chọọ Ọrụ Nkwalite ICO.
Copyright © 2022 Ndepụta ICO n'ịntanetị. Ikike niile echekwabara.
Achọrọ Ico Nkwalite?